ဘာသာရေး လူနည်းစုများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုအတွက် ကုလ သတိပေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Sr. Gen Min Aung Hlaing is losing the war in Kokang ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်
ဘာသာရေး လူနည်းစုများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုအတွက် ကုလ သတိပေး
M-Media > ဘာသာရေး လူနည်းစုများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုအတွက် ကုလ သတိပေး
မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၅- ဇင်ဂျန်းပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင်များအား တရုတ်အစိုးရက ဖိနှိပ်မှုများ တိုးလာခြင်းကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ဟီနာ ဘီလီဖဲလ်ဒ်က ဝေဖန်လိုက်ပြီး တရုတ်အစိုးရ၏ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ပေါ်လစီများမှာ စိုးရိမ်စရာကောင်းနေကာ မွတ်စလင်များအား အရှက်ရစေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်း သတိပေးပြောဆိုလိုက်သည်။
“အရှက်ရစေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကျွန်တော် ကြားရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရမ်ဇာန်ဥပုသ်လမှာ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီး စာသင်ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်မှုကို စွန့်လွှတ်ရတော့မှာပါ” ဟု ဘီလီဖဲလ်ဒ်က မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Reuters သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဘီလီဖဲလ်ဒ်မှာ ဇင်ကျန်းပြည်နယ်ရှိ အူဂွါမွတ်စလင်များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပြီး တရုတ်အစိုးရ၏ ထိုလုပ်ရပ်များမှာ အဓိကပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဇင်ကျန်းပြည်နယ်မြို့တာ် အူရမ်ကွီ၏ ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ကက်ရ်ှဂါရ် မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများ ပုဝါဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကလည်း တရုတ်အစိုးရမှာ အူရမ်ကွီတွင် မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများ ၀တ်ရုံရှည်ဝတ်ဆင်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ကုလမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ဘီလီဖဲလ်ဒ်မှာ တိဘက်ဘုန်းကြီးများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။
“ဘေဂျင်းဟာ ဘာသာရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို တကယ့်ကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ မတူညီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းငယ်လေးတွေကြားထဲက ဆက်ဆံရေးကို အဆိပ်ကျွေးနေတယ်။ ဂိုဏ်းတွေခွဲနေပြီး ထိန်းချုပ်လို့ ရဖို့ ပြည်သူတွေတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို ခွဲထုတ်နေပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာ အခြားကိစ္စတွေမှာတော့ စူပါပါဝါဖြစ်ပေမယ့် ဒီမိုကရေစီကို တရားဝင်ဖြစ်စေရာမှာတော့ အားနည်းပါတယ်”
အူဂွါမွတ်စလင်များမှာ တူရကီစကားပြော တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဖြစ်ပြီ ဇင်ကျန်းပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ကာ လူဦရ ၈ သန်းခန့် ရှိသည်။ အဆိုပါ ဇင်ကျန်းပြည်နယ်ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း တရုတ်အာဏာပိုင်များ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်ဒဏ်ကို ယခုအချိန်အထိ ဆက်လက် ခံစားနေရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရမှာ ဇင်ကျန်းပြည်နယ်ရှိ အစိုးရအဆောက်အအုံများတွင် ဘာသာရေးကျင့်သုံးမှုများ မပြုရဟု တားမြစ်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အ၀တ်အစား၊ အမှတ်အသားများကို ၀င်ဆင်ခြင်းမပြုရဟုလည်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လတွင်မူ ဇင်ကျန်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကာရာမေမြို့တွင် မုတ်ဆိတ်ရှိသော မွတ်စလင်အမျိုးသားများ၊ ပုဝါဆောင်းထားသော၊ ၀တ်ရုံရှည်ဝတ်ထားသော မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများကို အများပြည်သူသုံး ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ အသုံးပြုရန် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာလည်း ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီး အ၀တ်အထည်ဆိုင်များသို့ ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးဝတ် ၀တ်ရုံရှည်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ရသည်။
This entry was posted on March 15, 2015 at 6:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.